Trump oo ciidan u diraya Sacuudiga iyo UAE iyo Iran oo cadaadiska lagu kordhiyay
Trump oo ciidan u diraya Sacuudiga iyo UAE; Iran oo la cadaadinayo
WASHINGTON, US - Dowladda Mareykanka ayaa Jimcihii shalay shaacisay inay ciidamo u dirayso gacanka Khaliijka kadib weerarkii Todobaakdii hore lagu qaadey goobo laga soo saaro saliida oo ku yaalla wadanka Sacuudiga.
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale sheegay in cunaqabateyn midi ugu adkayd oo dal uu saaro Mareykanka uu kusoo rogay Iran, oo lagu eedeeyay weerarkii Sacuudiga.
Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa dib u cusbooneysiisay xayiraadda bangiga dhexe ee Iran, kadib markii saraakiil katirsan maamulka Trump ay sheegeen in duqeyntii loo geystay Sacuudiga horseeday sare u kac ku yimid qiimaha saliida suuqyada caalamka.W
Wasiirka difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa xusay in weerarkii Sacuudiga iyo soo ridistii diyaaradii drone-ka bishii June ay muujinayaan in Iran ay khatar ku tahay amniga gobolka Bariga Dhexe.
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegay in go’aanka ay ciidamada ugu dirayaan gobolka uu yimid kadib codsi uga yimid Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
“Iyadoo laga jawaabayo codsiga Sacuudiga, Madaxweynaha wuxuu bixiyay amar ah in ciidamo Mareykanka ah loo diro Sacuudiga iyo Imaaraadka si ay u difaacaan,” ayuu yiri Esper.
Trump ayaa bishii June bixiyay amar kagu weerarayo Iran kadib markii laga soo riday Mareykanka diyaarad drone ah, balse ka laabtay go’aankaasi daqiiqadii ugu dmabeysay.
Saudi Arabia ayaa Jimcihii soo bandhigtay in khasaaro xooggan uu kasoo gaarey weerarkii lagu qaadey xaruumaha ugu ballaaran ee saliida laga soo saaro oo ku yaalla Abqaiq iyo Khurais, iyadoo shirkadda Armaco ay hadda ka shaqeynayso dib uso celinta shaqada goobahaasi.Ab
qaiq ayaa lagu dhuftay 18 gantaal halka Khurais gantaal lagu garaacay, iyadoo duqeynta ay sababtay inuu dab xooggan uu qabsado xaruumahan oo lagu tilmaamay isha ugu weyn ee tamarta aduunka, oo saliid ceyriin ah laga soo saaro.
Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka, balse Sacuudiga iyo Mareykanka ay tahunsan inay Iran ka dambeysay, maadaama duqeynta loo adeegsaday gantaallo casri ah.
Trump oo kordhiyay Xayiraadda dalalka Islaamka
Caalamka 25.09.2017. 11:04
WASHINGTON, USA - Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarki uu dalkiisa uga mamnuucay in ay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka, isaga oo hadda ka dhigay sideed wadan.
Amarka cusub oo dhaqangali doona 18-ka bisha October ayaa saameyn doon ...